FAQs | टियांजिन Yixin पाइप उपकरण कं, लिमिटेड
प्राय: सोधिने प्रश्न
Q. किन यसलाई पाइपलाइन भनिन्छ सबै स्थिति स्वचालित वेल्डिंग मेशिन?
A: यसले पाइपलाइनको कुनै पनि स्थितिमा स्वचालित वेल्डिंग महसुस गर्न सक्दछ, जस्तै ओभरहेड वेल्डिंग, तेर्सो वेल्डिंग, ठाडो वेल्डिंग, फ्ल्याट वेल्डिंग, परिघीय सीम वेल्डिंग, आदि, जसलाई पाइपलाइन स्वत: वेल्डिंग रोबोट पनि भनिन्छ। यो हालको उन्नत पाइपलाइन वेल्डिंग स्वचालित मेशिन हो। पाइप स्थिर वा घुमाइएको छ, र वेल्डिंग ट्राली स्वत: वेल्डिंग महसुस गर्न स्वतन्त्र रूपमा सार्न सक्दछ।
Q. लागू पाइप व्यास र मेशिन को भित्ता मोटाई के हो?
A: ११4 मिमी र भित्ता मोटाई 50-50० मिमी भन्दा माथि पाइप व्यासका लागि उपयुक्त (HW-ZD-200 5-११० मिमी मोटाई पर्खाल वेल्ड गर्न उपयुक्त छ)।
Q. के वेल्डलाई एक्स-रे र अल्ट्रासोनिक द्वारा पत्ता लगाउन सकिन्छ?
A: हो, तपाईले जडानको रूपमा म्यानुअली GTAW आवश्यक छ, हाम्रो उपकरणहरूले स्वचालित रूपमा भर्न र क्याप गर्न सक्दछ। वेल्डिंग प्रक्रिया दोष पहिचान र फिल्मिंग जस्ता निरीक्षणमा अनुरूप छ।
Q. सम्पूर्ण उपकरणहरूको कन्फिगरेसन के हो?
A: पाँचौं पुस्ताको सबै स्थिति स्वचालित वेल्डिंग ट्राली, आयातित वेल्डिंग उर्जा स्रोत, वायर फिडर, वायरलेस कन्ट्रोलर, वेल्डिंग टर्च र अन्य केबलहरू (वाईएक्स -१ PRO० प्रो र HW-ZD-200 वेल्डिंग फिडरको साथ वेल्डिंग ट्रली एकीकृत)।
Q. के मेशिनले भित्री भित्ताबाट वेल्ड गर्न सक्छ?
A: हो, पाइप व्यास १ मिटर भन्दा बढी हुनु आवश्यक छ, वा पाइप व्यास पाइपमा प्रवेश गर्नका लागि पर्याप्त छ।
Q. कुन ग्यास र वेल्डिंग तार वेल्डिंग प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ?
A: यो १००% कार्बन डाइअक्साइड वा मिश्रित ग्यास (%०% अर्गोन + २०% कार्बन डाइअक्साइड) द्वारा सुरक्षित गरिएको छ, र वेल्डिंग तार ठोस-कोर वा फ्लक्स-कोर गरीएको छ।
Q. म्यानुअल वेल्डिंगको तुलनामा कुन फाइदाहरू छन्?
A: दक्षता 3-4-; वेल्डरहरू भन्दा बढि हुन सक्छ; वेल्ड सीम सुन्दर ढंगले गठन गरिएको छ; उपभोग्य वस्तुहरूको खपत कम छ। आधारभूत वेल्डिंग जानकारीको साथ एक वेल्डरले यसलाई ठूलो रूपमा चलाउन सक्छ, उच्च मूल्यमा पेशेवर वेल्डरहरूको एक ठूलो संख्याको भाँडाको लागत बचत।
Q. के वेल्डिंग ट्रालीको चुम्बकीय चक्र उच्च तापमान प्रतिरोधी छ? सोखना शक्ति के हो?
A: हामीले temperature०० ° को उच्च तापमान वातावरणमा परीक्षण गरेका थियौं, र त्यहाँ कुनै चुम्बकीय क्षीणन थिएन, र चुम्बकीय आकर्षण बल अझै 50० किलोग्राम राख्न सक्दछ।
Q. कसरी ओभरहेड वेल्डिंग गठन बारे?
A: ओभरहेड वेल्डिंग चार आधारभूत वेल्डिंग स्थिति बीच सबै भन्दा कठिन प्रकारको वेल्डिंग हो। योसँग पग्लिएको फलामको नियन्त्रणको लागि अत्यन्त उच्च आवश्यकताहरू छ, विशेष गरी तल ओभरहेड वेल्डिंगको लागि। योग्यता दर र गठन तकनीकी कठिनाइ हो। यिक्सिन पाइपलाइन सबै-स्थिति स्वचालित वेल्डिंग उपकरणहरूले सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न सक्दछन्, र वेल्डिंग आकार सुन्दर छ र योग्य दर उच्च छ।
Q. कुन कार्य शर्तहरू स्वचालित पाइप वेल्डिंगको लागि उपयुक्त छन्?
A: भित्री वा क्षेत्र (साइटमा) निर्माण कार्यहरू लागू गर्न सकिन्छ; बाक्लो-पर्खाल पाइप, विशाल पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप, flange वेल्डिंग, कुहिनो वेल्डिंग, आन्तरिक वेल्डिंग, बाह्य वेल्डिंग, ट्या tank्क क्षैतिज वेल्डिंग, आदि।
Q. के यो कठोर आउटडोर वातावरणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
A: हो, यो कडा र टिकाऊ हो, विशेष गरी पाइपलाइन ईन्जिनियरिंगको कडा परिश्रम गर्ने वातावरणको लागि उपयुक्त छ।
Q. के उपकरणहरू संचालन गर्न सजिलो छ? कसरी तालिम दिने?
A: स्थापना सुविधाजनक छ र अपरेसन सरल छ। तपाईं १-२ दिनमा सुरू गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंसँग बेसिक वेल्डर छ भने। हामी अनलाइन प्रशिक्षण वा साइटमा प्रशिक्षण र मार्गदर्शन प्रदान गर्न सक्दछौं।
Q. के त्यहाँ अपरेटिंग वातावरणको लागि कुनै आवश्यकताहरू छन्?
A: काम गर्ने ठाउँलाई पाइपको वरिपरि mm०० मिलिमिटर ठाउँ चाहिन्छ। पाइपको बाहिरी भागमा कोटिंग वा इन्सुलेशन तह रहेको छ, यो ट्र्याकलाई अनुकूलन गर्न सिफारिस गरिन्छ। १००० मिलीमीटरभन्दा ठूलो पाइप व्यास भएको पाइपहरूको लागि ट्र्याकलाई अनुकूलन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ, ट्राली बढी सजिलै चल्छ, र वेल्डिंगको गुणस्तर बढी छ।
Q. ट्या the्क बडी वेल्ड गर्न सकिन्छ? के पाइपको तेर्सो वेल्डिंग खडा हुन सक्छ?
A: हो, ठाडो वा तेर्सो वेल्डिंग सम्भव छ।
Q. प्राय: उपभोग्य वस्तुहरू र लगाउने भागहरू के हुन्?
A: उपभोग्य: वेल्डिंग तार (ठोस कोर वेल्डिंग तार वा फ्लक्स-कोरड वेल्डिंग तार), ग्यास (कार्बन डाइअक्साइड वा मिश्रित ग्यास); कमजोर भागहरू: सम्पर्क सुझावहरू, नोजलहरू, इत्यादि (सबै परम्परागत भागहरू हार्डवेयर बजारमा उपलब्ध छन्)।
प्रश्न: कस्तो प्रकारको तार तपाई प्रयोग गर्नुहुन्छ? (व्यास, प्रकार)
A: फ्लक्स तार: 0.8-1.2mm
ठोस: १.० मिमी
प्रश्न: के कुनै पाइप सामना गर्ने मेशिन पाइप बेभेलहरू तयारीको लागि आवश्यक छ?
A: आवश्यक छैन।
प्रश्न: वेल्डिंगका लागि कुन प्रकारको संयुक्त आवश्यक छ (U / J डबल J / V वा beove जोडहरू?)
Q. वेल्डिंग ट्रालीको मात्रा र तौल के हो?
A: वेल्डिंग ट्राली २0० मिमी * १mm० मिमी * १२० मिमी छ, र ट्रालीको वजन ११ किलो छ। समग्र डिजाइन हल्का वजन र बोक्नको लागि लचिलो छ।
Q. वेल्डिंग ट्रालीको स्विing्ग गति र चौडाई के हो?
A: स्विंग गति लगातार ०-११ देखि समायोज्य हो, र स्विmm चौडाई लगातार २ मिलिमिटर mm० मिमी बाट समायोज्य हुन्छ।
Q. Yixin स्वचालित पाइपलाइन वेल्डिंग उपकरणका फाइदाहरू के हुन्?
A: कम्पनीले १२ बर्ष भन्दा बढी समयदेखि R&D र पाइपलाइन स्वचालित वेल्डिंग उपकरणहरूको निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्यो, र ग्राहक र बजारको टेस्ट पास गर्यो। उत्पादको अपग्रेडको generations जेनेरेसन भइरहेको छ। नयाँ पाइपलाइन वेल्डिंग उपकरणको प्रदर्शन स्थिर छ, वेल्डिंग योग्यता दर उच्च छ, र वेल्ड सीम सुन्दर छ। बजारमा धेरै नक्कलहरू छन्। कृपया तपाईंको आँखा खुला राख्नुहोस् र गुणस्तर तुलना गर्नुहोस्।
एक अनुकूलित समाधान चाहनुहुन्छ?